‘Qof walba oo sawirkan arkay wuxuu aaminay inaan geeriyooday’. | HADHWADAAG NEWS
Home Arimaha Bulshadda ‘Qof walba oo sawirkan arkay wuxuu aaminay inaan geeriyooday’.
‘Qof walba oo sawirkan arkay wuxuu aaminay inaan geeriyooday’.
NewDelhi(HNN):-Maxamed Zubair, oo si arxan darro ah loogu garaacay rabshadihii Muslimiinta iyo Hinduuga ee magaalada New Delhi, wuxuu BBC-da uga warramay xaaladdii adkeyd ee uu soo maray, iyadoo dadkii sawirkiisa ka arkay daafaha dunida ay u maleynayeen inuu ku dhintay dhacdadaas.
Sawirkaas oo uu qaaday wariye ka tirsan Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa ku faafay baraha bulshada, wuxuuna astaan dhab ah u noqday rabshadihii caasimadda Hindiya gilgilay bishii lasoo dhaafay ee February.
Waxaa sawirka laga arkayaa Maxamed, oo Muslim ah, oo ay rag Hinduu ah ku hareereysan, iyagoo ulo waaweyn ku garaacaya.
Maxamed wuu ka badbaaday dhacdadaas naxdinta leh, oo ka dhacday waqooyiga-bari ee Delhi, inkastoo dadkii weerarka u geystay ay uga tageen meyd ahaan, kaddib markii uu miyir beelay.
Hase ahaatee wuxuu qabaa dhaawacyo aad u culus, maalmo ayuuna ku jiray isbitaalka.
Waxyaabaha uu ka xasuusto weerarkaas argagaxa leh ayuu uga warramay BBC-da.
“Kumannaan qof ayaa rabshadaha sameynayay, kuwo badan oo ka mid ahna aniga ayey igu goobteen, oo ay garaacitaan igu billaabeen. Biro dhuudhuuban iyo ulo ayey ila dhacayeen, markii dambena waan miyir daboolmay”, ayuu yiri.
Maxamed Zubair, oo 37 jir ah, waxay dhaawacyo culus kasoo gaareen weerar loo geystay 23-kii bishii February, 2020-ka
Maxamed wuxuu sheegay in la weeraray isagoo gurigiisa dib ugu sii laabanaya, xilli uu kasoo baxay Masaajid, 23-kii bishii Februaruy, 2020-ka.
“Qof walba oo guriga joogay wuxuu iga filayay inaan imaado anigoo nacnac wada. Waxaan horay usoo gaday rooti iyo xoogaa nacnac ah. Anigoo aad guriga ugu soo dhow ayaan maqlay dagaal la sheegayay inuu u dhaxeeyay Muslimiin iyo Hinduu. Islamarkiiba waxaan ogaaday in kumannaan qof oo ulo iyo dhagaxyo wata ay weerarro geysanayeen. Waxaan isku dayay inaan dib u laabto laakiin qaarkood ayaa i arkeen, isla durbadiina way i hareereeyeen”, ayuu yiri Maxamed.
Wuxuu sheegay in isagoo madaxiisa uu dhiig ka daadanayo lasii garaacayay.
Ugu dambeyntii kuwa weerarka u geystay waxay u maleeyeen inuu geeriyooday, isagoo waddada yaalla ayeyna ka tageen.
Dad kale oo u gurmaday ayaa goor dambe goobtii ka qaaday, waxayna geeyeen isbitaalka, sida uu BBC-da u sheegay.
Dhaawicii weerarka kasoo gaaray awgiis, Maxamed waxaa ku adag inuu kaligiis socdo
Muddo afar maalmood ah hooyadiis looma oggolaanin inay wiilkeeda aragto.
“Hooyadey si aan kala joogsi lahayn ayey u barooraneysay, qof walba oo qoyskeyga ka tirsanna wuu iga walwalsanaa. Ma jirin qof arkay sawirkeyga oo u maleynayay inaan noolaaday”, ayuu yiri.
Sidaasoo ay tahay, Zubair wuxuu sheegay in dhacdadaas aysan waxba ka baddalin fikirkiisii dhinaca bani’aadannimada.
“Jirkeyga unbey jajabiyeen mooyee damiirkeyga ma aysan burburinin, dhacdadan lama xiriirinayo wax fikir diimeed ah, dadka ficillada noocaas ah sameeya diin gaar ah laguma xisaabin karo”, ayuu yiri Maxamed Zubair.
Previous articleDhibaatada Mukhaadaraadka Sharci Darrada iyo Ciidamada Booliska Oo Marwalba Soo Bandhiga.
Next articleSomaliland oo joojisay dal ku galkii ay siin jirtay dadka ka imanaya Itoobiya ee ku socda Somaliland.